ऋण मूल्य के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki जमानत मूल्य
ऋण मूल्य के हो?
कुनै पनि ऋणको लाभ उठाउन चाहने व्यक्तिले सुरक्षाको साथ ऋणदाता प्रदान गर्नुपर्दछ भने ऋणको भुक्तानी सम्भव छैन। त्यसपछि ऋणदाताले सुरक्षामा असफल सेवाहरूको कारणले सन्तुष्ट गर्न सक्दछ। आदेशमा एक बाध्यकारी क्रेडिट लाइन फेला पार्न सक्षम भएमा जमानत मूल्य सुरक्षाको लागि। ऋण मूल्य व्यक्तिगत रूपमा एक ऋणदाता द्वारा गणना गरिएको छ, जस्तै बैंक। फरक बैंकले इच्छित क्रेडिटको मूल्य निर्धारण गर्न विभिन्न नियन्त्रण प्रणाली र गणना सूत्रहरूको प्रयोग गर्दछ। आखिर, ऋण मूल्य वांछित ऋण को लागी संपार्श्विकको रूपमा कार्य गर्दछ। ऋणको मूल्य, उदाहरणका लागि, सम्पत्ति, चल योग्य सम्पत्ति, अधिकार वा प्रतिभूतता जुन क्रेडिट सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य हो। जब ऋण मूल्य गणना गरिन्छ, संपार्श्विकको उचित मान क्रेडिट अवधिको अवधिमा निर्धारण गरिन्छ। संपार्श्विक मानले अधिकतम संपार्श्विक उचाईलाई निर्धारण गर्दछ। यस अवस्थामा, मूल्य उतार चढ़ाव वा अन्य भन्दा जोखिमका लागि छूट उधारो सीमा पहिले नै सबमिट गरिएको छ। ऋण मूल्य निश्चित निश्चित फ्ल्याक दर गणना हो, जुन वास्तविक मूल्यको तुलनामा बलियो छूटको विषय हो। यी गणनाहरू र निर्धारणहरू यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन् कि क्रेडिटसँग काउन्टर-ग्यारेन्टी छ र ऋणदाता फिर्ता नगर्न सकिँदैन भने ऋणदाता खाली छैन।
अचल सम्पत्ति को बंधन
अचल सम्पत्तिको स्थितिमा, गणनाहरूको लागि प्रयोग गरिने व्यक्तिगत मूल्याङ्कनहरू सधैं अलग रहन्छन्। प्रायः सम्पत्तिको हालको बजार मूल्य पनि ऋण मूल्यको गणना भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। ऋणको जमानाका लागि, एक मूल्य लामो समयको लागि निश्चित गरिएको छ जुन सम्पत्ति कुनै पनि समय बेच्न सकिन्छ। एक निश्चित अवधिको समयमा विशेष बजार उतार-चढ़ाव खातामा राखिएको छैन। यसको अर्थ उधारकर्ताको लागि छ कि त्यो बजार मूल्यको तुलनामा पर्याप्त छुटहरूको साथमा लगाउनु पर्छ।
विस्तारको विवरणको ऋणको गणना
ऋण मूल्य गणना मा ऋण मूल्य गणना मा लागू हुन्छ। यस सन्दर्भ मा, उधार मान अधिनियम गणना को लागि तीन तरिकाहरु प्रदान गर्दछ। अपार्टमेन्ट र भूमिको लागि, तुलनात्मक मूल्य कार्यान्वयन गर्न उचित मूल्य निर्धारित हुन्छ। यस अवस्थामा, मूल्याङ्कन गर्न वस्तुलाई मूल्य निर्धारण गर्न सक्षम हुन आदेश खरीदको नजिकको तत्काल वस्तुहरूको तुलनामा तुलना गरिएको छ। अचल सम्पत्तिमा, तथापि, सम्पत्ति मूल्य विधि प्रायः प्रयोग गरिन्छ, यसैले भूमिको मान र भवनको मूल्य थपिएको छ। यद्यपि, यस विधिलाई वास्तविक मूल्य निर्धारण स्थापित गर्न सकिन्छ जुन यातायात मान निर्धारण भन्दा उच्च छ। यो प्रक्रिया मालिक-कब्जा गरिएका अपार्टमेन्ट र आत्म-कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरूमा लागू हुन्छ। पट्टि वस्तुहरूको अवस्थामा, लाभप्रदता गणना गणना मा गणना गरिएको छ। यस तरिकाबाट पूर्ण रूपमा फरक मूल्य परिवर्तन परिणाम हुन सक्छ। यद्यपि, सम्पत्तिको सम्पत्ति मूल्य यस प्रक्रियामा धेरै महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देशको रूपमा कार्य गर्दछ। यदि गणनाको उचित मूल्य सम्पत्तिको मूल्यको बीस प्रतिशत भन्दा बढी छ भने, सम्मिले कमीलाई बनाइन्छ, अन्यथा देनदारहरू स्थगित हुनेछन्।
अन्य गणना भेरियन्टहरू
सहकारी बैंक र बचत बैंक सामान्यतया थप सिद्धान्तहरू लागू गर्न क्रमशः लागि गणना गणना गर्न सक्षम हुन। बचत बैंकहरू प्रायः उधार सिद्धान्तहरूमा बाँधिएका छन् जुन राज्यलाई राज्यबाट भिन्न हुन्छ। र सहकारी बैंक प्रायः दिशानिर्देशहरू प्रयोग गर्दछ जुन फेडरल एसोसिएशनद्वारा तय गरिएको छ। निजी बैंकहरू प्रायः विशेष मूल्याङ्कन लिनका लागि आफ्नै आन्तरिक नियामक ढाँचाहरू प्रयोग गर्छन्।
ऋण मूल्य को विषय मा एक धेरै रोचक परिभाषा र धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँ पाउन सकिन्छ थप लिङ्कहरू:
अघिल्लो लेखकल अवधि